Maayki Taaysen, 'Taaysen nafa sibiilaa' dorgommiitti deebi'ee Sadaasaa 28 irratti Roy Jones-n wal dhaanuuf kurfoo jira jedha
Sadaasaa 11, 2020
Challenger Mike Tyson (R) and WBA Heavyweight Champion Evander Holyfield mix it up during round one action at the MGM Grand on June 28. Tyson was disqualified in the third round for biting Holyfield on the ear. **DIGITAL IMAGE** - PBEAHUMNKAO
Jarii lachuu nama Amerikaati addunyaatti dorgommii boksii ykn tantoommuutiin beekan Taaysen amma nama ganna 54ti.Roy Jones jr nama ganna 51.
Taaysen marroo 58 dorogmee 50 moo’e tana keessaa 44 knock out ykn warra waldorgomeen dhahee gaggabsee moo’e. Maqaan baasaniif 'Iron mana ykn Maayki nafa sibiilaa jedhaniin.
Taaysen bara 1991 keessa intala dubraa ganna 18 buufate,humnaan bira rafee hidhaa ganna 6 itti muran innii fedhumaan waliin ramne malee hin buufanne jedhe.
Namii kun nama hedduu isa moo'u dhabee dorogmmii keessaa bahee amma ganna 15n duubatti itti deebihuutti jira.
Amma jabaa akka isaa Roy Jones jr jedhaniin wal dorgomuu fedha. Roy nama Amerikaati nama ganna 52ti. Marroo 75 dorgomee 66 moo’e tana keessaa 47 knock out ykn warra wal dhaaneen dhahee gagaaggabsee moo’e ufii ammo marroo sagal moohame
Jarii kun amma wal dorgomu fedha guyyaa itti wal dhaanan jijijjiiraa asi gahan. Amma Sadaasaa 28 Kaalifoorniyaati qabatan.Taaysen sun irraa bahee jennaan Evander Holyfielditti isa eegata.
Holyfield nama ganna 58ti.Taaysen nama ganna dorogmmii irratit marroo lama gurra ciniine. Bara 1996 adoo wal dhaanuti jiranuu marsaa 11essoo Maayki gurra nama kanaa ciniinee taphii achumaan dhumatee innii moohame.
Jara kana bara 1997 wati deebisan gaafasillee Maayki amalii innii gurra namaatiin ciniinu sun hin lakkimne jedhan.
Holyfeild nama ganna 58ti marroo 57 dorgome 44 moohee tana keessaa 29 knock out,warra wal dorgomeen gagaaggabsee dorogmmii keessaa oofe ufii marroo 10 moohahee lama walqixxe bahe
Taayseniin Iron Man,Taaysen nafa sibiilaa jedhan Roy ammo superman nama jabaa jabaa caalu jedhan.
Taaysen eegii leenjiitti deebi’e yaayyuu miila dhaabate tanuma qofaan hin dhaabadhu jedhu.
Taaysen jabeennuma durii suniin beekan moo amma maan keessa jiraan woma yoo innii dorgommii seene laalla. Hakri isaa haga ariiratanaan ammo abba a innii wal dorogmneenitti beeka. Taatullee Taaysen dhiira kurnya hedduu sekondii 30 keessatti cinaacha lafaan gahe.